Ku weyn Japan! 'Psycho Goreman' wuxuu farshaxan ka helaa Tatsuki Fujimoto, 'Chainsawman' Manga Qoraa - iHorror
Bogga ugu weyn Waxyaabaha Naxdinta LehNaxdin Majaajilo Ku weyn Japan! 'Psycho Goreman' wuxuu farshaxan ka helaa Tatsuki Fujimoto, 'Chainsawman' Qoraa Manga
Naxdin MajaajiloWarar Naxdin LehFilimooyin naxdin leh
Way adag tahay in la rumaysto waxay ahayd dhawr bilood ka hor oo kaliya in cunugga uur-ku-jirka ah ee majaajillada u ah majaajillada naxdinta leh (iyo dhammaan noocyada kale ee noocyada kale) Cilmi nafsiga (ama PG soo gaabin) ka Faaruq iyo Soo noqoshada Leprechaun agaasime Steven Kostanski ayaa lagu sii daayay dadweyne aan ogeyn. Waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee la kulma jahwareerka kubbadda cagta sanadkii hore wadis-ku saleysan Beyond Fest iyo PG ayaa tan iyo markii uu ku dhuftay dijital ah, fiidiyowga guriga, Iyo qulqulka gaarka ah ee Shudder. Waxayna umuuqataa in Archduke of Nightmares 'xukunkiisa argagaxa uu ku faafayo aduunka, maxaa yeelay Cilmi nafsiga waxaa laga sii daayaa tiyaatarka Japan gudaheeda 30-ka July. Iyada oo dhiirrigelinta filimku ay qayb ahaan ka soo qaadanayaan filimada Japanese tokusatsu monster / action sida Keita Amemmiya's Zeiram iyo Hakaider, sii deynta suuqani waa inaysan layaab ku noqon.
Sawirka iyada oo loo marayo Amazon
Buuquna wuxuu sii wadaa inuu u koco sidii manga ficil / naxdin leh Chainsawman qoraaga / farshaxanka Tatsuki Fujimoto ayaa la tusay filimka ka hor intaan si rasmi ah loo sii deyn wuxuuna sawiray farshaxan wanaagsan oo cabsi badan oo PG iyo Mimi ah! Per sarkaal Cilmi nafsiga Akoonka twitter-ka ee Jabbaan iyo Warka Oricon, Fujimoto ayaa loo ogolaaday inuu daawado filimka si uu ugu raaxeysto wuxuuna siiyay dib u eegis xushmad leh, isagoo faallo ka bixinaya "Wuxuu ahaa filimkii ugu xiisaha badnaa sanadka!"
Sawir ahaan Twitter
Farshaxanka su'aashu waxay muujineysaa Psycho Goreman oo leh jilitaankiisa, jirkiisa qulqulaya oo jilicsan oo ka dambeeya xitaa Mimi oo cabsi badan oo haysata dhagax sixir ah oo u oggolaanaya iyada inay xakameyso jinka awoodda leh ee awoodda leh. Isagoo taageere u ahaa Chainsawman manga tan iyo taxanaha markii hore orday, waa wax cajiib ah in la arko astaamaha Cilmi nafsiga oo loo bixiyay qaabka Fujimoto oo si fiican ugu habboon. Iyadoo la sii daayay Jabbaan Cilmi nafsiga wax ka yar laba toddobaad, waxaa sii xiiso badnaan doonta in la arko nooca saameynta iyo falcelinta dheer ee filimku yeelan doono!
2021ArtchainsawmanfanartxanaaqayJapanmusawirCilmi nafsigaSteven Kostanskitatsuki fujimoto